Shiinaha jilicsan PVC Warshadaha birta qaboojiyaha iyo soosaarayaasha | SJJ
Magnetyada qaboojiyaha PVC ee jilicsan waxaa lagu samayn karaa qaabkaaga gaarka ah 2D ama 3D. Magnet qaboojiyaha caadadu ma aha oo kaliya qurxinta guriga, laakiin sidoo kale waa shey xayaysiis wax ku ool ah oo weyn oo shirkadda ah.
Qoys walba wuxuu leeyahay qaboojiye waqtiga casriga ah. Dibedda qaboojiyaha waa meel lagu muujiyo jaceylkaaga oo noloshaada ka dhigaysa mid xiiso badan oo midab leh, oo leh birlabyo kala duwan. PVC -ga jilicsanMagnetyada qaboojiyahaayaa ah waxyaabaha ugu habboon ee lagu tusi karo fikradahaaga midabyo dhalaalaya., iyo in la ilaaliyo qaboojiyahaaga si ay u waxyeeleeyaan waxyaabaha adag sida birlabyada birlabka. Naqshaduhu waxay noqon karaan 2D ama 3D oo leh midabyo buuxsan, Calaamadaha la xardhay ama laga saaray qaabab kala duwan. Magnetyada qaboojiyaha ee jilicsan ee PVC sidoo kale waa aalad aad u fiican oo lagu xayeysiiyo sumadahaaga, fikradahaaga ama fikradahaaga, gaar ahaan tirooyinka kartoonku waa kuwa ugu caansan adduunka oo dhan.
Waxaad ka heli kartaa shaqooyin ka badan birlabyada jilicsan ee PVC oo leh lifaaqyo kala duwan, sida furayaasha dhalada, muraayadaha, kuwa haya jirrada, qabsatooyinka, buugaagta qoraalka, looxyada cad iyo iwm sida waafaqsan shuruudaha macmiilka. Agabkayagu waa saaxiibtinimo iyo bay'ad, waxay la kulmi karaan heerarka imtixaanka qaraabada ah ee ka socda Maraykanka ama Yurub.
Ujeeddooyin: u dhinta Struck, 2D ama 3D, hal dhinac ama laba dhinac
Midabada: waxay u dhigmi kartaa midabada PMS
Dhammaystirka: dhammaan noocyada qaababka waa la soo dhaweynayaa, astaamaha waa la daabici karaa, waa la xardhi karaa, saser ayaa la xardhay iyo wixii la mid ah
Lifaaqyada: birlabyo xoog leh, Magnets jilicsan, furayaasha dhalada, jillaabyada, looxyada, qalimaanta iyo kuwa kale marka loo eego shuruudaha macaamiisha
Xirxirida: 1pc/xumbo, ama raac tilmaamahaaga.
Hore: Calaamadaha PVC ee jilicsan
Xiga: Dusha sare ee qalinka PVC
3d Qaboojiyaha Qaboojiyaha
Magnetyada Qaboojiyaha Qabow
Magnetyada Qaboojiyaha Caadiga ah
Magnetyada Qaboojiyaha Cute
Magnets Qurxinta Qaboojiyaha
Qaboojiyaha leh Magnet
Magnetyada Talaagadda ee Shakhsi ahaaneed
Magnetyada Qaboojiyaha Sawirka
Jilicsan PCV Qaboojiyaha